Lewandowski mase Heynckes, Keebaa Qaldanaa, markii ay isku dhaceen Shalay? – Gooldhalin
Bundesliga Horyaallada WARARKA
Lewandowski mase Heynckes, Keebaa Qaldanaa, markii ay isku dhaceen Shalay?
Robert Lewandowski ayaa diiday in uu xataa Salaanta ka qaado tababare Jupp Heynckes keddib markii beddel looga saaray ciyaar ay kooxdiisu la qaadatay naadiga Cologne.
Bayern Munich macallinkeeda Jupp Heynckes ayaa sheegay in uusan la yaabi doonin qaladka uu galay laacibka Robert Lewandowski kaasoo garoonka dhan isaga baxay, markii beddel loo taagay kulankii Bundesliga kooxda hanatay ay 3-1 uga badisay naadiga Cologne Sabtigii.
Lewandowski waa uu hareer maray Heynckes
Weeraryahanka Poland, oo dhaliyay goolka labaad ee kooxdiisa, waxaa la beddelay 77 daqiiqo markii ay mareysay iyadoo lasoo geliyay ciyaarta Sandro Wagner, waxaana xusid mudan in Heynckes uusan salaamin, markii horena uu diidayba in beddel loo taago.
Lewandowski jawaabtii uu beddelkiisa ka bixiyay ayaa waxay aheyd mid Ereyo badan ku dhalisay Heynckes, Tababaraha 72-jirka ah ayaa la yaabay waxa uu ku kacay Gooldhaliyahaan.
“Waan ogahay marka aanu nahay gooldhaliyeyaasha waxaan Nahay Qudurro had iyo goorna waxaan u xisaabtannaa Gooldhalinteenna uun,” ayuu yiri. “Waan wadahadalnay waana is fahannay. Markii aan garoonka ka saaray, igama aysan aheyn Maadeysi, waayo waxaan ahay macallinka, cid walbana waan beddeli karaa.
“Kuma aanan raaxeysteen in ley beddelo haddaan weerar ahay. Wuxuu doonayay inuu dhaliyo goolkiisii 30-aad ee hoyaalka. Waxaan hadda ka hadleyno waa in aan illownay wixii na dhexmaray.”
Previous Previous post: Fernando Torres oo Toosh ku ifiyay halka uu aadayo Atlético marka uu ka tago!!
Next Next post: Wararkii ugu Waaweynaa Wargeysyada Yurub ee maanta, Martial iyo Willian oo la isku beddelanayo!